Swipe ara-tsosialy: fanandramana mpampiasa malina amin'ny fanomezana asa soa | Martech Zone
Swipe ara-tsosialy: fanandramana mpampiasa manan-tsaina amin'ny fanomezana soa
Alakamisy, May 22, 2014 Talata, Martsa 22, 2016 Douglas Karr
Imbetsaka amin'ny marketing dia fomba fanao tsara ny mandalo ny dingan'ny fiovam-po, mamantatra ny dingana sy ny fitondran-tena tsirairay, ary ny fahatakarana izay vahaolana azo ampiharina handresena azy. Ho an'ny fikambanana mpanao asa soa, ny fanapahana ny serivisy no manao ny asa sy ny fotoana sy ny toerana anaovana fanomezana.
Ity vahaolana avy amin'ny Misereor ity, ny Slide sosialy, dia vahaolana mahomby amin'ny famahana olana roa miavaka:
Tsy mitondra vola intsony ny olona.
Ny boaty fanomezana dia tsy manome fahitana ny zavatra vita amin'ny vola.
Ampidiro ny Swipe Social. Ny horonan-tsary iray dia mifanerasera amin'ny volan'ny carte de crédit an'ilay olona manome vola. Rehefa mikosoka sy manome sakafo izy ireo, dia tapa-mofo iray no tapatapahana. Na rehefa mikoso sy manome tolona hiadiana amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko izy ireo dia tapaka ny fatorana mihazona tanan'olona. Vahaolana mahavariana tokoa.
Tags: fanomezana asa soafiantranafitondran-tena fanomezanafanomezanamisereortsindrio ara-tsosialy
Doka finday tena izy avy amin'i Zapp360
Trano fitehirizana: Tantara an-tsary ho an'ny iPad